Kay “Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah Xukuumad cusub loo soo dhiso” – Radio Muqdisho
Xafiiska Hawlgalka Qaramada Midoobay ee Kaalmaynta Soomaaliya (UNSOM) wuxuu garwaaqsaday codkii uu baarlamaanku kalsoonida ugala noqday Ra’iisal Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya, wuxuu amaanay shaqada uu ka qabtay nabadaynta Soomaaliya, wuxuuna ku baaqayaa in si degdeg ah Xukuumad cusub loo soo dhiso.
Ergeyga Gaarka ah Nicholas Kay wuxuu yiri, “Soomaaliya waxay hadda u baahantahay midnimo siyaasadeed ee dhexmarta hay’adaheeda iyo madaxdeeda iyo marxalad dheer oo xasilloon. Dowladda Federaalka iyo Baarlamaankaba waxaa sugeysa shaqo muhim ah oo degdeg ah si ay gacan uga geystaan inay Soomaaliya gaarto horumar dhanka siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha inta lagu jiro kow iyo labaatanka bilood ee ka hartay xilkooda. Qaramada Midoobay iyo dhammaan saaxiibada Soomaaliya waxay ku hanweynyihiin in dhowaan la sameeyo xukuumad loo wada dhanyahay laga wadaqaybgalo.”
“Waxaan rajeynayaa, marka Xukuumadda la dhiso, in madaxda Soomaaliya ay isla gaari doonaan heshiis ku aaddan sidii looga hortagi lahaa qalalaaso sidaas oo kale ah iyo xasillooni darro dhacda mustaqbalka. Waxaan ku faraxsanahay in Baarlamaanka Federaalka ay hadda suuroobi doonto inuu maalmaha soo socda diiradda saari doono dejinta shuruucda muhimka ah si uu u suurtoobo isbedelka siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan sharciga dhisaya Guddiga Qaranka Madaxabanaan ee Doorashada iyo Guddiga Xudduudaha iyo Federaalaynta.” ayuu yiri Ergayga Kay
“Qaramada Midoobay waxaa weligeed ka go’an inay la shaqeyso Dowladda Federaalka iyo dadka iyo madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo gaaro ujeeddooyinka lagu qeexay Dastuurka Ku Meelgaarka, Heshiiska Hiigsiga Cusub ee Soomaaliya iyo Aragtida 2016. In la dhammeystiro dhismaha dowlad-goboleedyada federaalka ah ayaa ah caqabad weyn oo loo bahanyahay in laga gudbo toddobaadyada soo socda.
Waxaa muhim ah in haweenka, dhallinyarada iyo kooxaha laga tira badanyahay la siiyo fursad ay kaalin buuxda kaga cayaaraan hanaankan iyo geeddi-socodyada siyaasadeed ee kale,” ayuu raaciyay.